Business Networking for entrepreneur
Kukhona phezu 400 Izigidi entrepreneur
Cabanga nje ukube singakwazi ukuxhumanisa nabo.
Khangisa Company yakho, Local and Emhlabeni
Dala isikhangiso sakho free in the network ibhizinisi IEAGE.
Find Partners New
Bamba iqhaza ezithangamini ukwakha amathuba amabhizinisi.
IEAGE Izindaba & Insights
Business Network imiphumela for the usomabhizinisi
Inethiwekhi Business IEAGE It ihlose ukwakha eziphilayo kwezamabhizinisi, idalule ibhizinisi kanye ukusheshisa yokuthengisa. Ukuthola amakhasimende amasha, ukuthuthukisa amabhizinisi amasha, thembisa in the world digital, avumele ukuthunyelwa on the Internet, ukudala iziteshi ezintsha ematfuba amasha, kukhona izimpokophelo Business Network for Entrepreneur of IEAGE.
Entrepreneur has umkhiqizo wakho noma isevisi ezikhishwe, free, akukho icala, bangakini, esifundeni futhi jikelele (Business lwemibhalo).
Develop amakhasimende amasha kanye nabalingani (sebenzisana izinkundla), nje nokwandisa ibhizinisi lakho.
Nokwandisa inhlangano, inzuzo kanye namasu (funda ulwazi olusha kanye namakhono ezifundweni).
Yibani omzimba kusifunda zinhlekelele kwezomnotho. (Ukwakhiwa inethiwekhi contact abahlinzeki kanye namakhasimende).
Inethiwekhi ibhizinisi namabhizinisi lwemibhalo, nge kwesikhathi, Ukwakha isimo zezomnotho nezenhlalo for osomabhizinisi kanye lakhiwa osomabhizinisi, olinganiselayo ngempela futhi wemfanelo, lusekelwe emsebenzini, team, ukubambisana nokukhulumisana.
Kubalulekile ukuba ukukhangisa kanye iqhaza inethiwekhi global, a Internet. Izwe ixhunyiwe, kanye usomabhizinisi, kusuka kuphi emhlabeni, Kufanele futhi kufanele babe nethuba ukukhangisa imikhiqizo kanye namasevisi, omhlaba. The Business Network, do IEAGE, ine lo msebenzi.
I IEAGE kuvumela osomabhizinisi iqhaza enethiwekhi ukudala amathuba amasha futhi ngcono ukuphathwa, ngokusebenzisa Business Directory, izinkundla in esifundeni ngasinye, Academy IEAGE enikeza ulwazi nezamabhizinisi izifundo.
The Ecosystem Entrepreneur IEAGE ine njengoba izakhiwo:
Yakha indawo yebhizinisi emkhatsini osomabhizinisi;
Benza imikhiqizo kanye namasevisi baziwa edolobheni elingumakhelwane kanye ngakolunye uhlangothi emhlabeni;
Akwazi ukuxhumana ngezilimi eziningana (ukubhala ngolimi kanye readability ngolunye ulimi);
Hhayi ngoba yokuthengisa big (kunengozi ngoba entrepreneur encane: ngenxa yokuntula cash flow, umthamo production nangokuthembela eyodwa umthombo semali);
Kuyinto inqwaba kungcono, amakhulu yokuthengisa amancane ukubambisana, kunokuba sithembele on ikhasimende noma umlingani single (ukwehlisa ingozi);
Ukugqugquzela futhi ahlinzeke ngolwazi kanjani ukuphatha futhi ikhule ibhizinisi lakho, ngezizathu kwesicelo ezisebenzayo, Ukusebenza ngendlela, futhi nokuncipha sokuvalwa zebhizinisi entsha eminyakeni yayo yokuqala operation. Kwenze kungenzeka, Isinyathelo sesibili, ukwanda, esimeme, kuhlelwe futhi ihlelwe, ibhizinisi ngokwayo;
Usizo izifunda (kanye nemiphakathi yabo) abampofu ukuthuthukisa imikhiqizo yabo futhi lula Ukudobela inzuzo yabo emazweni athuthukile.
Ngena futhi isize ukwakha imvelo omkhulu ebhizinisi ukuthi uzokwenza umehluko omkhulu ezimpilweni izinkulungwane, million amabhizinisi amancane kanye naphakathi ukuthi akhawunti for ngaphezu 50% ingabe emprego global. Ake ukudala umhlaba ongcono, alinganayo bonke!
← IEAGE Izindaba & Insights
Business Environment and Ulwazi →
Portugal SGPS Properties & Imidlalo